Tanora tsy tara – Fitondrantena, fahaizana… : tanora feno , tsy mandringa | NewsMada
Manomboka eo amin’ny faha-18 taona hatramin’ny faha-25 taona eo no tena herin’ny fahatanorana. Takian’ny fiarahamonina ankehitriny ny tanora feno amin’ny lafiny rehetra ary tsy tokony handringa na hisy fahabangana.
Tsy sarotra fa mila finiavana sy fahambonian’ny toe-tsaina raha te ho tonga amin’ny fahatanorana mahafeno ny filan’ny fiarahamonina. Voalohany amin’izany ny fahaizana mitondra tena. Mahatohitra ny fakam-panahy ratsy rehetra. Midika fahendrena sy fifehezan-tena izany. Efa modely ho an’ny namana manodidina ianao eo.
Raha ao ny fahendrena fa tsy ao ny fahaiza-miaina anefa dia mandringa ihany izany. Lanjalanjao ny fihetsika. Rehefa ao anatin’ny sangy dia misangy, tsy atao tafahoatra. Rehefa ao anatin’ny fahamatorana dia matotra fa tsy milongilongy akory no dikan’izany. Kajio ny avoaky ny vava sy ny fihetsika amin’ny sehatra izay aleha : fiangonana, mariazy, fahoriana, famangiana, fivoriana….
Tsy ampy ireo fa tsara kokoa raha tanora mahavita adidy amin’ny manodidina. Ao am-pianarana, any am-piangonana, eny amin’ny fiarahamonina, any anaty fikambanana… Ny adidy tsy an’olon-dratsy. Misongadina kokoa ny tanora mihatrana hatrany amin’ny adidy tokony hatao miohatra amin’ny tsy tonga lava.
Mameno ireo voalaza ireo ny fahaizana amam-pahalalana. Aza manaiky ho gisitra. Milofosa amin’ny fianarana ary manana fanamby handresy hatrany. Ankoatra ny any am-pianarana, tsara koa ny tanora mahara-baovao. Mahafantatra ny zava-mitranga sy ny fivoaran’ny toe-draharaha misy eto amin’ny firenena indrindra ireo vaovao mafana.
Efa manana tombony ny tanora ankehitriny amin’ny fikirakirana ny « internet » ka hararaoty hanovozana ny tsara izy ireny. Miavaka ny tanora maharaka ny vaovao iraisam-pirenena ary tsy azo ambakaina izy ireny. Herezo ary ry tanora namana !